Dhammaan casriga ah HTC dalka suuqa la dhisay tababare u hagaagsan HTC oo awood aad si hagaagsan xogta dhexeeya computer iyo smartphone HTC. Nooc ayaa taariikhda oo aad u hagaagsan karo waxaa ka mid ah farriimaha, sawiro, videos, xiriirada iyo dhammaan faylasha kale la heli karo. Tababaraha u hagaagsan HTC waa software waxtar leh guud ahaan idiin, laakiin waxa ay leedahay cillado gaar ah oo aad u. The karbaashidda ugu horeysay dib waa ay interface user adag in inta badan aad jahawareerinaya.
Sababtoo ah halka ay non-user nooca saaxiibtinimo, laga yaabaa in aad bilaabayso raadinta lagu beddeli karo tababare u hagaagsan HTC this. Sababta baaritaan sida ay tahay in tababare u hagaagsan HTC asalka waxaa ka buuxa kala carar iyo bixiyaa waqti adag si ay u maareeyaan smartphone HTC. Ilaalinta maskaxda ku hagaagsan HTC software kale Tababaraha sida baahida ballaaran ee u hagaagsan HTC kale oo tababare, horumarinta kala duwan ayaa soo saartay kala duwan kuwaas oo bixiya khibrad .Wadashaqayntaas dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo oo siman in aad. In this post, waxaan dooneynaa inaan ku qor baxay ugu fiican 5 HTC kale oo tababare u hagaagsan iyo muujiyo qaababka ay caan aan.
Qaybta 1. Top 5 lagu bedelan karo HTC nidaameed (Manager)
1. Wondershare Mobile Tag for Android 719Kb $39.95
2. Phone Explorer 7.1 Mb Free
3. marooji Double 21.1 Mb Free
1. Wondershare Mobile Tag for Android
Wondershare Mobile Tag for Android ( http://www.wondershare.com/android-manager/ ), (waayo, Win) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) ( http://www.wondershare.com/mac-android-manager/ ) waa hagaagsan htx ugu wanaagsan Tababaraha bedel kasta oo maalin marayay sababta oo ah interface heer sare user-friendly iyo fursado aan xad lahayn ee sahaminta aad HTC Android phone. Waxay kaa caawinaysaa in aad maamuli content phone sida Chine, waraaqaha, fariimaha, xiriirada, music, videos iyo abuuro gurmad ah ee wax walba in yar seconds.
Just dib u fadhiistaan ​​iyo nasato, sababtoo ah haatan aad ku shaqeeyaan kartaa HTC Android qalab (wax kasta oo ay model) arrintan tababare u hagaagsan la yaab leh oo la abuuro raad raac ah oo xog qiimo leh oo dhan la ammaanka weyn. Waxaad wadaagi karaan videos, heeso, sawiro, barnaamijyadooda, fariimaha, xiriirada iyo walax kale oo u dhexeeya aad computer iyo HTC Android phone. Waxaa la socon kara versions Windows iyo Mac. Software Tani waa qumman yahay, waayo, geeks mobile HTC jecel inay sii alaabtayda oo uu si wanaagsan u abaabulan oo dhan
Muuqaaladan muhiimka ah ee Wondershare Mobile Tag for Android ka mid ah:
App ee kaabta, xogta app, sawiro, videos, fariimaha, music, xiriirada, jadwalka taariikhda, abuse yeedha, oo ay karaa si fudud loo soo celiyo haddii laga badiyay.
Hel iyo xaq fariin ka your computer si toos ah u diri.
Download / rakibi / barnaamijyadooda uninstall / wadaag ee aad taleefan HTC.
Beddelaan wax music leheyn iyo video iyo soo dejinta Lugood music waa in.
Hagaagsan marka aad la xiriirayso Outlook, Windows Live Mail, iyo Windows Cinwaanka Book si sahlan weyn.
Si fiican u shaqeeyaan HTC, Samsung, Sony, Motorola, Google, ZTE, Huawei, iyo in ka badan.
Sida magacaba ka muuqata, MyPhoneExplorer ( http://www.fjsoft.at/en/downloads.php ) waa HTC nidaameed bedelka Manager kaamil ah si ay u sahamiyaan telefoonka HTC iyo dib oo dhan aad xog muhiim ah in dhowr ilbiriqsi. Waxaa aad u saamaxaaya in ay helaan dhammaan dadka ay khuseyso iyo kuwa badbaadin account aragti MS, maareeyaan fariimaha, qaadan gacanta ku content in gallery iyo dhammaan xogta gurmad wakhti dambe la isticmaalo. Wax la yaab leh oo ku saabsan bedelka waxtar leh tababare u hagaagsan HTC waa in aad u isticmaali kartaa sida codsiga la qaadan karo. Just ku kaydi gudahood qalab USB aad iyo u qaadan meel kastoo aad tagtidba. MyPhoneExplorer waa HTC nidaameed bedelka Manager universal in shaqeysaa in ka badan 700 oo qalabka Android iyadoo wax dhibaato ah. Waa tababare warbaahinta super-degdeg ah oo awood kuu siinayaa in la abuuro gurmad oo dhan files warbaahinta in kombuutarka. Waxaad si fudud ku bedelan kartaa macluumaadka u dhexeeya aad PC iyo qalab HTC Android iyadoo la isticmaalayo qalab qiimo leh.
Qaababka ugu muhiimsan ee My Phone Explorer ka mid ah:
Buug Cinwaanka in aad u saamaxaaya in ay si toos ah u hagaagsan oo dhan aad la xiriirayso Gmail, Muuqaalka iyo dhufto mail oo weyn oo kale.
Abaabulaha gol jadwalka.
SMS fursadaha dejinta Archive / dhoofinta.
Wac liisaska / itusi Profile / qufulka Phone oo farabadan oo ah alaabtii kale.
Heli Windows / Mac.
doubleTwist ( https://www.doubletwist.com/desktop/ ), Xoog iyo superfast qalab Manager HTC nidaameed gelineya inaad u hagaagsan music, video iyo sawiro si fudud. doubleTwist aad u saamaxaaya in ay xirmaan iyo maarayn qalab HTC adigoo isticmaalaya WiFi ama cable USB ah. Tababaraha u hagaagsan doubleTwist waa mid cajiib ah sida ay bixisaa taageero MTP aallada HTC aan taageeri cable USB. Interface ee tababaraha u hagaagsan yahay mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo in aad u baahan tahay ma tababar adag oo kale ka hor inta aanay bilaabin isticmaalka this app PC la yaab leh.
Qaababka ugu muhiimsan ee doubleTwist ka mid ah:
Connect qalab HTC aad via WiFi ama cable USB.
Hagaagsan oo dhan warbaahinta, sawiro iyo xidhiidhka ka dhexeeya telefoonka HTC Android iyo PC
Aad fudud oo si sahlan loo isticmaali interface
Codsiga miisaanka Light u PC
Buuxi to content mobile helaan
MoboRobo ( http://www.moborobo.com/ ) waa maamulaha HTC nidaameed kale oo dhan-in-badan oo ka mid ah muuqaalada cajiib ah. Qalabka hagaagsan ma u ogolaanaya ma aha oo kaliya in aad la wadaagto files u dhexeeya aad PC iyo qalab HTC laakiin sidoo kale awood u aad u dejisan oo dhan ringtones aad jeceshahay iyo wallpapers iyadoo la isticmaalayo aad PC oo aan wax eedeeyay xogta. Interface ee wadaha smartphone MoboRobo waa mid aad u user saaxiibtinimo oo aad fursado Customization aan dhamaadka lahayn. MoboRobo siinayaa habka ah gurmad degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo xogta, taas oo aad dib u kartaa oo dhan xog muhiim ah oo ay ku jiraan music, sawiro, videos, fariimaha oo dheeraad ah. Oo dhan files gurmad si fudud lagu heli karaa iyada oo la isticmaalo qalab kale maamulka. Waxaad u isticmaali kartaa si qoraal fariin saaxiibadaa via aad PC. Just xiro qalabka HTC aad la leedahay PC ka dibna bilowdo dirista iyo helista qoraalka aad screen desktop.
MoboRobo sifooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Helitaanka Unlimited dhammaan xogta gudahood qalab HTC aad.
Nidaameed iyo dib ilaa dhan photos, videos, heeso iyo warbaahinta faylasha nooc kasta
Helitaanka liiska xiriirada iyo farriimaha
Android xarunta xiriirada kala iibsiga iPhone
Online feature fariin.
La jaan qaada dhammaan hababka ugu waaweyn ee qalliinka
AirDroid ( http://www.airdroid.com/ ) waa ka duwan oo kale oo fudud weli xiiso u hagaagsan HTC Tababaraha kooxda bixisa agabyo maareyn lahayn oo aad u. AirDroid waa aalad awood maamul si aad u manag qalab HTC ka website. Waxay bixisaa aad farabadan oo ah alaabtii oo ay ku jiraan gurmad iyo .Wadashaqayntaas ah oo dhan xog muhiim ah, sida files warbaahinta, xiriirada iyo fariimaha. AirDroid The yaab leh oo bixiya kula fursad loo diro loona helo SMS aad screen Desktop halka adiga oo isticmaaleya isticmaale side phone HTC. Mid ka mid ah wax cajiib ah in yimaado in this qalab u hagaagsan yahay in ay awood u aad si ay ula socdaan qalab HTC iyo tirtiro dhammaan macluumaadka ku yaal meel fog adigoo isticmaalaya qalab this. Sidoo kale waxay qaadan kartaa sawir tuugga oo isku dayay in uu furo phone HTC. Oo weliba aad, maamuli karin oo dhan barnaamijyadooda aad Android oo kulan la this tababare u hagaagsan Android la yaab leh iyo isbedel aan xadeyn sameeyo.
Qaababka ugu muhiimsan ee AirDroid ka mid ah:
Hagaagsan oo dhan oo ay ku jiraan xogta files warbaahinta, fariimaha, iyo xiriirada
Xogta Share dhexeeya PC iyo qalab Android
Samee raad raac ah oo xogta ka dib soo celinta
Chine Mobile utility maamulka
Qaybta 2. barbardhig 5 lagu bedelan karo Manager HTC nidaameed
Wondershare Mobile Tag for Android
Gurmad Data iyo soo kabashada Haa Haa Haa Haa Haa
.Wadashaqayntaas Data Haa Haa Haa Haa Haa
Files Media helaan Haa Haa Haa Haa Haa
Maamulka Apps Haa No No No Haa
Waafaqsan OS Cross Haa Haa Haa Haa Haa
Dual xirnaanta (wifi / USB) WiFi + USB USB WiFi + USB USB USB
Tracker telefoonka Mobile No No No No Haa
Utility Desktop SMS Haa No No Haa Haa
Qaadan karo App Haa Haa No No No
> Resource > Android > Best 5 HTC nidaameed Manager lagu bedelan karo